Mamadika lahatsoratra ho tsoroka mba hialana amin'ny lesoka fanontana | Famoronana an-tserasera
Paul gondar | | Graphic Design, sary, Tutorials
Mandefasa lahatsoratra mankany amin'ny fiolahana aza soratana tena ilaina rehefa miresaka misy karazana tetikasa ho an'ny fanontana. Raha tiantsika handeha tsara ny tetikasanay, na inona na inona olana amin'ny resaka fanontana dia tsy maintsy ataontsika izay hahazoana antoka miolakolaka daholo ny lahatsoratray teo aloha.
Rehefa mandray tetikasa sary hanontana ianao dia tsy maintsy manana andian-dahatsoratra lafin-javatra ara-teknika manatrika raha te hisoroka ny aretin'andoha amin'ny ho avy isika ary hahatratra a vokatra tsara indrindra.
Rehefa mandray tetik'asa sary amin'ny milina fanontam-pirinty isika, dia fahita matetika ny fananana karazana hadisoana mora azo, na amin'ny tsy fitoviana loko, sary manjavozavo na tsotra fotsiny amin'ny lesoka typografika. Afaka misoroka fahadisoana maro isika sy ny ampitao amin'ny curves ny lahatsoratra Alohan'ny handefasana ny rakitra hanonta, dia mety ho iray amin'izy ireo.
Lahatsoratra iray an'ny a Typography mamaritra ny endri-tsoratra izay azontsika aseho tsara amin'ny solo-saintsika fa rehefa mamindra ilay rakitra amin'ny PC hafa tsy mahomby antsika izany satria tsy napetraka izany. Tokony ho fantatsika fa typeface iray aseho raha toa ka napetraky ny solosaina Noho io antony io dia tsy maintsy ampitantsika amin'ny curve ny lahatsoratra, raha tsy manana ny endritsoratra ny milina fanontam-pirinty dia hovaina amin'ny hafa izy rehefa manonta ny rakitra.
1 Maninona no manova ny typography ho curves?
2 Avadiho ho tsipika miaraka amin'ny mpanao sary ny lahatsoratra
3 Zavatra tsy tokony ho adino rehefa mamadika lahatsoratra ho miolakolaka
Maninona no manova ny typography ho curves?
Manalavitra lesoka ara-typografika
Izahay dia mampiseho matihanina
Manala ny ho avy izahay aretin'andoha
Avadiho ho tsipika miaraka amin'ny mpanao sary ny lahatsoratra
Mandalo a lahatsoratra mankany amin'ny fiolahana zavatra tena mora sy haingana izy io, miaraka amina tokana Click vitantsika ny mampita ny lahatsoratray amin'ny curves ka hisorohana ireo lesoka an-tsoratra raha ny momba azy pirinty ny lahatsoratra.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia safidio ny lahatsoratray fipihana eo amboniny.
Rehefa manana ny lahatsoratra voafantina isika dia kitiho eohandefasa an-tsoratra ny menio ambony ary mitady ny safidy an'ny mamorona drafitra. Raha nandeha tsara ny zava-drehetra, dia hivadika ho curve ny lahatsoratray ary azo atao pirinty tsy misy olana.
Zavatra tsy tokony ho adino rehefa mamadika lahatsoratra ho miolakolaka
Ny lahatsoratray tsy azo ovaina intsony noho izany dia mila mahazo antoka isika fa tsy hanao fanovana hafa amin'ireo lahatsoratra. Ny tena ara-dalàna sy aroso dia tahirizo amin'ny rakitra hafa ny lahatsoratra tsy mandeha mihodina miolakolaka raha sanatria ka mila fanovana farany isika.
Tsy afaka manoratra lahatsoratra intsony izahay (MASY)
Miaraka amin'ny mpitovo Click mahazo isika sorohy ny typo mahazatra be fa ny tetikasa sary dia mety diso tanteraka amintsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Avadiho ho tsoroka ny lahatsoratra mba hialana amin'ny lesoka fanontana
Eugene Gil dia hoy izy:
Ao amin'ny programa famolavolana dia nisy foana (ary) submenu izay ahafahanao manambatra ny sary sy ny endritsoratra ampiasaina amin'ny antontan-taratasy izay alefa mba hamokarana. Tsy ilaina, noho izany, ny mamadika azy ireo ho lasa volo. Ary raha halefa mora amin'ny PDF ilay antontan-taratasy, satria ny sary sy ny endritsoratra dia tafiditra ao anatiny. Izany rehetra izany, mazava ho azy, raha miresaka momba ny matihanina isika.
Valiny tamin'i Eugenio Gil